Adeegyada daruuriga ah sida laydhka iyo is-gaadhsiinta waxa cashuur 5% ah lagu soo rogay shacabkii halka ay ka ahayd in shirkadaha la cashuuro (income tax). Markaa hooyada tamaandhada ku iibisa wadada dhinaceeda ee Dawladda Hoose cashuurto, markay guriga ku noqoto waxa laga rabaa cashuur kale oo matalan saaran laydka ay […]
God ha qodin hadad qodona ha dheerayn ku dhici doontaana mooyeee. Tariikhdu waxay ahayd Oct 25, 2017 malintii saddexaad ee ololaha doorashada xisbiga kulmiye . Waxan safar ugu baxnay degaanada waraabeeye iyo degaano kale oo tiro badan, aminta ama goor sheegtu waa abara 11: 30 maalinimo . Safarka waxa hoggaaminaya […]
December 28, 2019, 11:43 am
MAXAA INAGA INA HAYSTA MIYEYNAAN DAD AHEYN? ”Su’aasha uu ku bilaabmayo qoraalku ayaa ah xujada la rabo bal in qofkasta oo akhriyaa isweydiiyo kana dareen celiyo sida uu wax u arko ee jawaab inagu filan oo aynu ku qanacno ku heli karno , waayo wax isweydiin horteed jawaab […]
December 27, 2019, 9:06 am
XUKUUMADA MADAXWAYNE BIIXI WAXA AY QABAN KARI WAYDAY DOORASHOOYINKII DALKA EE MUDAYSNAA , WAXAANA AY DIB ISAGA RIIXDAY MARKII LABAAD , TAASI OO U EEG IN NIDAAMKII DOORASHOOYINKA DALKA LA ISKA DAAYEY !!!
GEEDI SOCODKII DIMUQARADIYADA IYO DOORASHOOYINKII SOMALILAND OO GOD MADAW KU SII DHACAYA IYO MUDO KORDHIN AAN DURUUFO KEENAY LA GARANAYN OO LUXUDKA DHIGAYSA MUSTAQBALKII UMADANI HALGANKA DHEER USOO GASHAY Dalka jamhuuriyadda Somaliland waa dal dimuqaraadi ah oo qaatay nidaamka axsaabta badan iyo doorashooyinka xorta ah , sida ay shuruucda dalku […]
Dadka iyo dalka jamhuuriyada somaliland waxa ay sharciga iyo xeerarka u samysteen in lagu kala baxo oo la ilaaliyo laguna dhaqmo , waxa uu dastuurka qaranka jamhuuriyada soamiland si cad u sharaxayaa xoriyada banaanbaxa waxaana qeexaya qod 32 faqradiisa koowaad iyo labaad . waxa sidaasi oo kale xisbiga iyo ururada […]
Miisaaniyadii 2011-kii Maxamed Xaashi diyaariyey ayaa ka wax qabad badan sagaalkii miisaaniyadood ee ka dambeeyey
Miisaaniyadii u horeysay ee uu diyaariyey wasiir Maxamed Xaashi Cilmi waxay ahayd 83-milyan dollar,waxaanu ka qaaday 47 milyan, waxay ka badnayd miisaaniyadii ka horeysay 70%, isagoo wax cashuur ah kordhin bal xiitaa dhimay cashuuro badan oo dadka laga qaadi jirey. Mashaariicda waaweyn ee lacagtaasi yar ku qabtay waxay si toos […]
December 17, 2019, 12:23 pm
Waxaan Jeclahay dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan nolol wanaagsan, nabad gelyo iyo xasilooni, ay aduunka kula tartamaan iney gaadhaan. Somalilandina waa kuwa ugu horreeya soomaalida oo mudan iney noloshaas helaan. Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, Khayrka Allaha waafajiyee, ayaa magacaabay wasiirra cusub sida wararku sheegeen. Waa munaasabad […]
Saxmada wadooyinka Burco iyo Wadada ugu halista badan shilka ugu badana kadhaco W/Q Shaafici Shaafi H Dhiibsane
Wadada wadnaha ah ee plaza ayaa noqotay tan ugu badan ee kudhaco shilka ugu badan oo sababa khasare maal iyo mid moodba ,gaar ahaan inta u dhaxaysa garoonka diyaradaha, hutelka nasteexo iyo goolada. Sida laysla qirsanyahay had iyo goor waxa shilka sababta. 1-Darawal xumo, wado xumo, gaadiid xumo,iyo hagid la,aan, […]
Ilaa tobankii sano ee u danbeeyey waxaa golaha amaanka laga hor akhriyayey warbixinno ka haldaaya xaalada Somalia. Warbixinahaas oo uu inta badan jeediyo ergayga gaarka ah ee xoghaya guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Somalia. Warbixiintaa waxaa inta badan lagu sheegaa in xaalada Somalia soo wanaag sanaanayso dhinaca amniga, dhismaha […]
Hambalyo bogaadin iyo duco ayaan u diraya wasiir maxamed muuse diiriye, Alle ha kugu asturo xilka cusub e lagu magacabay,
Hambalyo bogaadin iyo duco ayaan u diraya wasiir maxamed muuse diiriye, Alle ha kugu asturo xilka cusub e lagu magacabay, Hambalyo bogaadin iyo duco ayaan u diraya wasiir maxamed muuse diiriye, Alle ha kugu asturo xilka cusub e lagu magacabay, Runtii waxan qiraya in wasiirku xilaal kala duwan so qabtay, […]